Mara Tecno R7
Hub Impact: Tinye maka Mmemme Innovation Nri IKEA
Ebe e si nweta foto: agagharị. Ng
Tecno R7 bụ phablet ekwentị mkpanaaka ngwaọrụ site na Tecno mobile. Nke a 5.5inch ngosi phablet anọwo na ekwentị ekwentị Nigeria ma na-eme nke ọma.
Na-egosipụta ihe nhazi hexa-core, Tecno R7 dị ezigbo mma ma na-adọrọ mmasị. Ọbụghị naanị na ngwa ahụ pere mpe, kamakwa ọ juputara na atụmatụ ndị ọzọ na-anọghị na ụfọdụ ndị bu ya ụzọ.
Ka anyị ugbu a a lee anya na ihe na-atụ anya na nke a Tecno phablet.
Atụmatụ na-akpali akpali
Arụ ọrụ nke Tecno R7 bụ ihe dị ka ihe anyị hụrụ na ekwentị ndị ọzọ Tecno. Nke a bụ ihe butere site na hexa-core processor nke dochiela quad-isi processor na ụfọdụ ngwaọrụ Tecno gara aga. The processor arụmọrụ na-ọzọ gbakwunyere site a 2GB RAM.
Tecno R7 nwere ihe ngosi dị egwu. Dị ka ụdị ndị mbụ ọ na-egosipụta. A na-agbakwunye ya site na iko Gorilla.
Ihu nke Tecno R7 agbanweela oke ihe site na ihe anyị hụrụ na ekwentị Tecno. Enweela mmeghe nke OTA melite, na; ya mere, ịchọghị nkwụnye Nova launcher na ekwentị a. Na mgbakwunye na ngosi ahụ dị egwu, ịnwere nhọrọ sitere n'ọtụtụ isiokwu etinyegoro na ekwentị.
Phablet ahụ na-enye ndị ọrụ nnukwu ihuenyo. Ihe mkpebi 720 site 1280 bia na njupụta nke 320dpi. Ya mere, na ekwentị a, ikiri ihe nkiri na igwu egwuregwu bụ ihe na-akpali akpali ma na-akpali akpali.
Na ekwentị a, ị gaghị echefu na selfie ọ bụla mara mma. Tecno R7-abịa na a 5metgapixel n'ihu igwefoto na captures ịtụnanya selfies. Anyị enweghị ike ịhapụ ikwu banyere 13megapixel igwefoto azụ nke nwere ọkụ ọkụ.
Na-agba ịnyịnya Tecno R7 na gam akporo 4.2.2. Ọ na-abịa na nkwalite OTA, ma enwere ike ịkwalite ya na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo. Nhazi nke phablet a bu hexa-isi MediaTek (MT6592). O nwere ARM Cortex-A7 ije na 2GB RAM.
Na abụọ iche ịhọrọ site na ma ndị 16GB or 8GB mbipute, Tecno R7 na-enye ohere mpụga ebe nchekwa mmeba ruo 32GB.
The 2430mAh batrị na Tecno R7 bụ nnọọ oru oma.
NETWORK NA NJIKỌTA
Tecno R7 bụ sọrọ-SIM. Ọ nwere ike 3G na-akwado GSM900, DCS1800 na WCDMA2100MHz band band.
O nwekwara Wi-Fi, GPS na Bluetooth.
Tecno R7 bụ nnukwu. Ọ bụ ebughibu Phablet na ịke na klas. O sina dị, ọ bụghị dị oké ọnụ dị ka ụfọdụ elu ọgwụgwụ phablets na ahịa taa. Ya arụmọrụ bụ ahụkebe, na onye ọ bụla ga-n'anya nwere a ekwentị.